Pheasant Breeds | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Pheasant Breeds
7 tsara indrindra ny fankahalana
Taona maro lasa izay, ireo mponina tao amin'ireo tanàna akaikin'ny Reniranon'i Phasis tany Gresy fahiny no nanomboka nanararaotra vorona tsara tarehy, izay manana tsiro mahafinaritra. Inoana fa ny anaran'ny Fasista no anarany amin'ny anaran'ny renirano Fasis, akaikin'izy ireo no nentina voalohany tao an-trano. Ny Fasista no solontenan'ny lehibe indrindra amin'ny Chicken Detachment.
Ho an'ny mpangataka, ny fiompiana foza any an-trano dia toa be mpahasary fa tsy dingana mahomby. Saingy raha ny marina, io voromailala io dia tsy misy fahasamihafana amin'ny heniheny mahazatra ary mahatsapa tsara ny taona manontolo ao anaty tranom-bahiny. Ahoana ny fomba handaminana ny safidin'ny ririnina azo antoka amin'ny toe-pahasalamana henjana, inona no tokony homena, ahoana no hisorohana ny fiainana an-tany sy ny fanabeazana ny zaza - isika dia hitantara izany rehetra izany any aoriana any.
Viriosy fotsy: ny endrik'izy ireo, ny toerana misy azy, ny zavatra mihinana azy
Ho an'ny mpankafy ny karazam-borona tena izy, dia mety hahatonga ny haavon-tsakafo marina ny fasana fotsy iray, satria, ankoatra ny endriny mahafinaritra, dia manavaka azy amin'ny fahasoavany sy ny fahatsorany ny comparative amin'ny fikarakarana azy. Inona no tadiavin'ny fotsy hoditra maina? Tian'ny maro ny tantsaha mpamboly manintona io karazany io noho ny loko marevaka, ary eo ambanin'ny fepetra tsara amin'ny fitazonana ny felam-bintana dia hijanona foana fotsy.
Ny hevi-baventy dia heverina fa ny solontenany lehibe indrindra amin'ny karazana azy ireo, ary eo anivon'ireo mpiara-mianatra hafa kosa dia mipoitra ny endrika ivelany tsy mamirapiratra. Ny endriky ny firavaka dia tsy ao anatin'ny felam-boninkazo fotsiny, fa ao amin'ny rafitry ny vatana ihany koa. Inona avy ireo endrik'io vorona io, izay asehony amin'ny fikarakarana sy ny fikojakojana - mianatra bebe kokoa avy amin'ilay lahatsoratra.
Feon'ny Mpanjaka: inona no heveriny, aiza izy no miaina, inona no fikarakarana azy
Biby tsara tarehy sy mahafinaritra mahavariana ny mpanavotra, saingy indrisy fa lasa manimba azy ny hatsaran-tarehiny. Ny fanandramana ho an'ny fasista dia efa ela no isan'ny malaza indrindra, satria ny mpihaza dia voasintona tsy amin'ny felam-bintana mahafinaritra, fa koa amin'ny alalan'ny fanantenana hihinana lalao matsiro. Vitsy ny karazam-bozaka sasany efa vitsy dia vitsy ary manomboka mieritreritra ny fiompiany ny olona.
Fomba fisainana mahazatra: inona no heverina, aiza izy no miaina, inona no sakafo
Androany dia hiresaka momba ny fasana isika - vorona iray, izay karazana fialamboly malaza, ary tandindon'ny South Dakota any Etazonia. Ity vorona tsara tarehy tsara tarehy ity dia havanan'ny ankamaroan'ny akoho ary mahatsapa tsara ihany koa ny toeram-piompiana mpamboly. Any amin'ny faritra misy anay, ireo mpitsikilo hafahafa sy manerinerina dia mijery hafahafa, saingy azo atao ny mikolokolo azy ireo eto.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Pheasant Breeds